तपाईंले आफ्नै व्यवसाय किन सुरु गर्नुपर्छ - Print Peppermint
3 सक्छ, 2019 | उद्यमी, स्वरोजगार, सुरूवात
के तपाई आफ्नो हालको कामको दैनिक grind बाट थकित हुनुहुन्छ?
हाकिमसँग काम गर्ने बिरामीले कसलाई पाउँदैन?
के तपाइँको प्रतिभा र जोश बेहतर उपयोग मा राखिएको थियो?
हुनसक्छ यो तपाईको लागि एक कर्मचारी हुन छोड्ने र आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने समय हो।
एक उद्यमी बन्नेले तपाईंलाई आफ्नै छनौट गर्न, तपाईंको आफ्नै मार्ग चार्ट गर्न, र तपाईंको वित्तीय र व्यक्तिगत लक्ष्यहरू महसुस गर्न स्वतन्त्रता दिन्छ। यो सँधै सजिलो हुँदैन, तर पुरस्कार अरू कसैको लागि काम गर्ने भन्दा बढी छ।
मानिसहरू तपाई जस्तो दैनिक काम गर्छन्। त्यसोभए तपाईं किन हुनुहुन्न? सायद तपाईको टाउकोको पछाडि एउटा ब्यापिंगको बारेमा विचार आएको छ। हुनसक्छ यो त्यस्तो चीज हो जुन तपाईको बारेमा भावुक छन्, जुन तपाईको अद्वितीय प्रतिभा प्रयोग गर्दछ, वा तपाईले एउटा विचार प्राप्त गर्नुभयो जुन अरूलाई केही फाइदा हुन्छ।
यहाँ ११ कारणहरू छन् जुन तपाईंले आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्नुपर्दछ
यदि तपाइँ एक व्यापार तपाइँको लागी सही हो कि भनेर पत्ता लगाउन कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ भने, दिमागमा राख्नुहोस् कि ब्यापार सुरु गर्ने यति धेरै कारणहरू छन् कि त्यहाँ संसारमा उद्यमीहरू छन्। तपाइँका कारणहरू तपाइँको लागि अनुपम हुनेछ, तर यहाँ केहि तरिकाहरू छन् यदि तपाइँ सही ट्र्याकमा हुनुहुन्छ भने।
तपाईं वास्तविक अवसर देख्नुहुन्छ
उत्तम व्यवसायका विचारहरू बजारमा असुरक्षित आवश्यकताको जागरूकताबाट वसन्त हुन्छन्। यदि तपाईंसँग एक प्राविधिक नवीनता, अवस्थित उत्पादनमा सुधार, वा सेवा आवश्यक छ भने, यो तपाईंको लागि अवसर हुन सक्छ। तपाईको लागि वास्तविक अवसर छ भनेर निश्चित गर्न अनुसन्धान गर्नुहोस्।
तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ तपाईको आइडियाले मान पुर्‍याउँछ
आफैलाई सोध्नुहोस् कि कुन उत्पादन वा सेवा तपाईंले सोच्दै हुनुहुन्छ यसबाट फाइदा लिनेछ र त्यहाँ कति जना छन्। यो कसरी भिन्न हुनेछ कि त्यहाँ बाहिर पहिले नै छ? तपाइँलाई एक अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव चाहिन्छ जुन तपाइँसँग सबै भन्दा टाढा सेट गर्दछ र तपाइँको मूल्य वाचामा डेलिभर गर्दछ।
तपाईंसँग उद्योग अनुभव र ज्ञान छ
एक अवसर हेरेर र राम्रो विचारको साथ आउने जुन ग्राहकलाई मूल्य प्रदान गर्दछ यो समीकरणको अंश मात्र हो। एक उद्योग मा एक व्यवसाय शुरू कि तपाइँ संग कुनै अनुभव वा ज्ञान छ कुदाल को लागी एक कडा प row्क्ति छ। तपाइँको सबै व्यवसायिक अनुभव र शिक्षा तपाइँको आफ्नै व्यवसायमा लागू गर्नु धेरै सजिलो छ।
तपाईंसँग समर्थन समूह छ
तपाईंको विचार कत्ति महान् छ, तपाईंको उद्योगमा कत्ति धेरै अनुभव छ, वा तपाईं कति चलाख हुनुहुन्छ, तपाईं एक्लो गर्न सक्नुहुन्न। तपाईंको व्यावसायिक र व्यक्तिगत सर्कलमा गम्भीर दृष्टिकोण लिनुहोस् र आफैलाई सोध्नुहोस् कि यदि उनीहरू तपाईंलाई सहयोगी हुनेछन् भने। यदि होईन भने, के तपाइँ व्यापारिक नेताहरू वा अन्य सल्लाहकारहरूसँग सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ जुन तपाइँलाई सल्लाह दिन सक्छ?
तपाईंसँग स्रोतहरू उपलब्ध छन्
तपाईंसँग भएको सबै स्रोतहरूको सूची बनाउनुहोस्। यदि तपाईंसँग बैंकमा पैसा छैन भने, तपाईंसँग क्रेडिट, loansण, वा सम्भवतः लगानीकर्ताको लाइनमा पहुँच छ? के तपाईंसँग, वा तपाईं प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, उपकरण, उपकरण, र आपूर्ति तपाईंलाई आवश्यक छ? के तपाईंसँग कोही छ जो तपाईंलाई जानको लागि मद्दत गर्न केही समय दिन इच्छुक हुन्छ?
तपाईं आत्म-प्रेरित र अनुशासित हुनुहुन्छ
तपाईको आफ्नै व्यवसाय चलाउनु भनेको तपाईलाई आफैंलाई धक्का दिनु पर्छ प्रत्येक दिन के गर्नु आवश्यक छ। तपाईंसँग एक उच्च स्तरको आत्म-प्रेरणाको स्वामित्व छ जुन तपाईंलाई ड्राइभ गर्दछ। तपाईले 40० घण्टाको कामको हप्ताको बिचारलाई त्याग्न पनि तयार हुनुपर्दछ र कामहरू गर्न जति लाग्छ त्यति समय लिन तयार हुनुपर्दछ।
तपाईं जान्न र बढ्न तयार हुनुहुन्छ
व्यापार मालिकहरूले वित्त, मार्केटिंग, बिक्री, मानव संसाधन, ग्राहक सेवा, नियामक अनुपालन, र अन्य विषयहरूको असंख्यको बारेमा जान्नुपर्दछ। तपाईले प्रश्नहरू सोध्न, कक्षा लिन, र अनुसन्धान गर्न तयार हुनुपर्दछ जुन तपाईंलाई थाहा छैन। तपाईं एक विशेषज्ञ हुन आवश्यक छैन, तर तपाईं मूल कुरा बुझ्नु आवश्यक छ।
तपाई स्वतन्त्र हुन चाहानुहुन्छ
अरू कसैको लागि काम गर्नु केही व्यक्तिहरूका लागि सान्त्वना हो। उद्यमीहरू, अर्कोतर्फ, सबै भन्दा माथि आफ्नो स्वतन्त्रताको मोल गर्छन्। यदि तपाईं स्वतन्त्रता चाहनुहुन्छ भने आफ्नै नियम बनाउनुहोस्, आफ्नै समय तालिका बनाउनुहोस्, र आफ्नै निर्णय गर्नुहोस्, व्यवसाय चलाउन यो उत्तम तरिका हो। तपाईं मात्र जवाफ दिनुहुन्छ।
तपाईं उत्साहित र डराउनुहुन्छ
अज्ञातमा उफ्रिनु भन्दा रमाईलो कुरा त्यहाँ छैन। यदि तपाईं डर र उत्साहको एकसाथ मिसिएको महसुस गर्दै हुनुहुन्छ भने, यो पूर्ण सामान्य हो। वास्तवमा यो राम्रो चीज हो। ती भावनाहरु तपाइँ सावधान र तपाइँ केहि मा विचारशील हुन ड्राइव हुनेछ। यदि तपाईं धेरै शान्त हुनुहुन्छ र पछि ढल्नुभएको छ भने, तपाईंले अवसरहरू गुमाउनुहुनेछ।
तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ कि तपाईं असफल हुन सक्नुहुन्छ
असफलताको डर एक सपना हत्यारा हो। यो नयाँ प्रयासको लागि प्राकृतिक प्रतिक्रिया पनि हो। सत्य यो हो, त्यहाँ कुनै तरिका छैन जुन तपाईं ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईं एक व्यवसाय चलाउनमा सफल हुनुहुनेछ। वास्तवमा, तपाईं नराम्रोसँग असफल हुन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं जोखिम स्वीकार्न इच्छुक हुनुहुन्छ र जे भए पनि प्रयास गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ, तपाईं मुटुमा उद्यमी हुनुहुन्छ।
तपाईं जिद्दी आशावादी हुनुहुन्छ
त्यहाँ बाटोमा अवरोधहरू, अवरोधहरू, र चुनौतीहरू हुनेछन् र तपाईंले तिनीहरूलाई छेउछाउ बिना हेड-अन सामना गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ। तपाई अट्टेरी नै आशावादी हुनु आवश्यक छ जब पनि चीजहरू अन्धकार देखिन्छ र समय गाह्रो हुन्छ। यदि तपाईं आफैंमा अनन्त विश्वास पाउनुभयो भने, तपाईंले आफ्नो व्यापारमा सफल हुनको लागि के लिनुभयो त्यो पाउनुभयो।
व्यापार सुरू र चलाउन को लागी सजिलो केहि छैन। वास्तवमा यो व्यक्तिले गर्न सक्ने सबैभन्दा गाह्रो काम हो। यसको लागि अथाह समय, उर्जा र संसाधनहरू चाहिन्छ र सफलताको ग्यारेन्टी भने कहिले हुँदैन। यो रमाईलो, थकाऊ र अक्सर डरलाग्दो छ।
उद्यमीहरूले यो सबै गुमाउन सक्छन्, वा यसलाई ठूलो बनाउन सक्दछन्। यदि तपाईं व्यापार सुरू गर्ने बारे सोच्दै हुनुहुन्छ भने, याद गर्नुहोस् कि सबै राम्रा र नराम्रो सबै तपाईंको उत्तरदायित्व हो। तर त्यो के हो यो सबै सार्थक बनाउँछ।
यदि तपाईं यहाँ हामीले सूचीबद्ध गरेको कुनै पनि कारण आफैंलाई देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईं सफल व्यवसायी मालिक बन्ने बाटोमा राम्रो हुनुहुन्छ। तपाईंको भविष्यको लागि योजना बनाउनुहोस् तपाईंको व्यवसायिक विचार अनुसन्धान गरेर, तपाईंको समर्थन समूहको रैली गर्नुहोस्, तपाईंको स्रोतहरू भेला गर्नुहोस्, र डुबकी लिनुहोस्।
10 १० सर्वश्रेष्ठ मिनी व्यापार कार्ड धारकहरू र केसहरू
उत्तम लोगो Get प्राप्त गर्न चरण-देखि-चरण गाइड